पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट यसरी बच्न सकिन्छ | Ratopati
पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट यसरी बच्न सकिन्छ
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeचैत २३, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । नसर्ने रोगमध्ये महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि अग्रस्थानमा रहेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको उक्त अंगमा अनियन्त्रित कोषिकाहरुको वृद्धि हुनु हो ।
कसरी हुन्छ ?
पाठेघरको मुखको क्यान्सर यही कारणले हुन्छ भनेर किटान नभए पनि एक प्रकारको भाइरल संक्रमण यसको मुख्य कारण तत्व मानिन्छ । ह्युमन पापिलो नामको किटाणुका केही प्रजाति यसको प्रमुख कारण हुन् ।
यसैगरी शारीरिक सरसफाइमा ध्यान नदिनाले, धेरै जनासँग शारीरिक सम्पर्कमा राख्नाले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ । पाठेघरको मुखमा बारम्बार संक्रमण हुने महिलाहरुलाई यस किटाणुले पाठेघरको मुखमा रहेका कोषिकाहरुमा संक्रमण गर्दछ र त्यसलाई अनियन्त्रित तवरले बढ्न मद्यत पु¥याउँछ ।
—परिवारमा कसैलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको (वंशानुगत)
—प्रजनन् सक्षम कुनै पनि उमेरका महिलालाई यो रोग लाग्न सक्दछ । विशेषगरी ३० वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरका महिला जसको विवाह भएको अथवा शारिरीक सम्पर्क भएको महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
— सानै उमेरमा विवाह भएको र धेरै सन्तान जन्माएको महिलालाई यो रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
—यौन व्यवसाय गर्ने महिलामा पनि यो रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
पाठेघरको क्यान्सर सबै व्यक्तिमा एउटै लक्षण हुन्छ भन्ने हुँदैन । व्यक्ति अनुसार फरक —फरक लक्षण हुन सक्दछ ।
—सुरुवातमा धेरै गन्हाउने पानी बग्ने, र पानीसँगै रगत मिसिएको हुनसक्छ । सँगसँगै पटकपटक इन्फेक्सन भइराख्ने पनि हुनसक्छ ।
— महिनावारी नभएको बेलामा पनि रगत देखापर्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हो ।
— महिनवारी बन्द भइसकेको महिलामा फेरि रगत देखा परेमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको होकी भन्ने शंका पनि गर्न सकिन्छ ।
— क्यान्सर धेरै फैलिसकेको अवस्थामा भने खुट्टा सुन्निने, ढाड तथा कम्मर दुख्ने हुन्छ । साथै दिसा पिसाबमा पनि समस्या देखा पर्न सक्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरका रोगथामको लागि समय—समयमा आईभिएफ परीक्षण गर्नुपर्छ । गर्भाशय श्राव परीक्षण गर्दा गर्भाशयको क्यान्सर शुरुमै पहिचान गरेर उपचार गर्न सकिन्छ ।
— सन्तुलित भोजन (फलफूल, हरियो सागसब्जी प्रशस्त मात्रामा खाने ।
— दैनिक शारीरिक क्रियाकलाप गर्ने, सानो उमेरमा विवाह नगर्ने र धेरै सन्तान नजन्माउने ।
—हेपाटाइटीस बी विरुद्धको खोप लगाउने र ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस खोप लगाउनाले पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
–गन्हाउने पानी बग्ने, महिनावारी अनियमित हुने, महिनावारी बन्द भइसकेको महिलाहरुमा पुनः रगत देखा पर्ने, यौन सम्पर्क पछि रगत देखा पर्ने जस्ता लक्षण देखा परेमा परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
(यो सामाग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नसर्ने रोगसम्बन्धी पुस्तिकाबाट साभार गरिएको हो)
फेल खाए ट्रम्प र अमेरिका : मलेरियाको औषधीले कोरोना निको पार्ने हैन, उल्टै मृत्युदर बढाउने !
सःशुल्क कोभिड–१९ परीक्षण : कति जायज ?
पीसीआर परीक्षण छाडेर सरकारले किन किनिरहेछ एन्टीबडी जाँच्ने र्‍यापिड टेस्ट कीट ?
नेपालमा कोरोनाबाट दुई जनाको मृत्यु, तर लक्षण किन फरक-फरक ?
अफगानिस्तानमा २४ घन्टामा ५६० कोरोना संक्रमित थपिए
स्याङ्जाकी कोरोना संक्रमित महिलालाई पोखरा ल्याइयो
कोरोनाका कारण ३४ वर्षीय सैनिकको मृत्युपछि डाक्टरले उनकी आमालाई पनि बचाउन सकेनन्
रसियाद्वारा एससीओ र ब्रिक्स शिखर सम्मेलन स्थगित
बजेट लेखन : राति १ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसे अर्थमन्त्री, अन्य टीम रातभर खटिए
‘गणतन्त्रको नेतृत्व नै गलत हातमा पर्‍यो’
तीन महिना नपुग्दै स्वास्थ्य सचिव कोइरालाको सरुवा
फ्रान्समा कोरोनाको उपचारमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन औषधि प्रतिबन्ध
यस्तो थियो सुवर्ण शमशेरले ल्याएको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको नेपालको पहिलो बजेट
के रेखाले सञ्जय दत्तसँग गरेका थिए विवाह ? खबर सुनेर अचम्मित भएको थियो बलिउड